Alicja - Amin'ny fampitandremana - Countdown amin'ny fanjakana
Tompontsika to	Alicja Lenczewska	:
Handeha ny fandresen'ny fon'ny reniko malaky… ho avy ny mangiran-dratsy sy lohataona ny fiangonana masina… homena fanadiovana izay hitondra ny Zanakalahin'ny haizina ho amin'ny MAZAVAN'NY FAHAMARINAN'ANDRIAMANITRA, ary ny olona tsirairay dia hanao araka ny sitrapony ny fahazavan'io Fahamarinana io, tsy maintsy misafidy ny fanjakan'ny Raiko na manolotra ny tenany mandrakizay ho an'ny rain'ny lainga… i Maria no hiavian'ny FIANGONAN'NY FIANGONANAKO, mba hamirapiratan'ny MPANDRAY feno an'ny ANDRIAMANITRA FAHAMASINANA. - 8 Jona 2002
Hifaly i Satana sy ny mpanompony, toy ny nifalian'izy ireo tao Jerosalema. Fa ny fotoana handresena azy ireo dia ho fohy, satria ny maraina dia ho tonga amin'ny Fitsanganan'ny Fiangonana Masina, tsy mety maty, miteraka Fiainana Vaovao eto An-tany - ny FANamasinan'ny Zanako. ” - 11 Novambra 2,000
Ireo hafatra dia neken'ny Hierarchy Poloney tamin'ny taona 2017. Avy amin'ny boky faharoa an'ny hafatr'i Alicja, “Exhortations” (Slowa Pouczenia).
Vakiteny mifandraika amin'i Mark Mallett:
Ny fitsanganan'ny maty tamin'ny Fiangonana
Misokatra ve ny vavahady atsinanana?
Posted in Alicja Lenczewska, Messages, Ny fanazavana momba ny feon'ny fieritreretana, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.
← Ny papa sy ny vaovao…
Edson - Tsy misy Pretra →